နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။
Posted by black chaw on May 30, 2013 in Creative Writing, Myanma News, News | 22 comments
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေကို အားပေးကြရအောင်...။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက် ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးသားနေတယ်ဆိုပြီး သတင်းပေးထားတာ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကတည်းကပါ…။
ခေါင်းစဉ်ကြိုပေးပြီး ရေးစရာက မယ်မယ်ရရမရှိ…။
ခေါင်းစဉ် က ဘောင်ခတ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး စိတ်လွတ်လက်လွတ်ရေးလို့ကို မရနိုင်ခဲ့ပါ…။
လိုရင်းရောက်မရောက်ကို သာ မိတ်ဆွေတို့ ဆုံးဖြတ်ပေးကြဖို့ပါ…။
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေထုတ်ဝေခွင့်ပြုလိုက်တာ မိတ်ဆွေတို့ သိထားပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ…။
ကြေးမုံ နဲ့ မြန်မာ့အလင်း အစိုးရကိုယ်စားပြုသတင်းစာ ၂ စောင်လောက်နဲ့ လည်ပတ်နေခဲ့ရတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀ထဲကို ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေ အတည်ပေါက်ကြီး ၀င်လာခဲ့ပါပြီ…။
ရွေးချယ်ခွင့် ရလာတဲ့ သဘောပေါ့…။
အစိုးရသတင်းစာတွေဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံတို့ မြန်မာ့အလင်းတို့ကလည်း ပုံသဏ္ဍန်တွေပြောင်း၊ ကာလာတွေထည့်လို့
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေကို ဈေးကွက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်လာခဲ့တာကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်…။
စစ်မြေပြင်သဘောအရပြောရရင် အစိုးရသတင်းစာတွေက အသာစီးရနေပါတယ်…။
ဈေးနှုန်းကလည်း အစိုးရသတင်းစာတွေက သာပါတယ်…။
ဖြန့်ချိရေးစံနစ်အရလည်း အစိုးရသတင်းစာတွေက ခိုင်မာမှုရှိပြီးသား လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်ရုံပါပဲ…။
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေကတော့ အခုမှ စတင်တည်ဆောက်နေရဆဲဆိုတော့ မခိုင်မာသေးပါဘူး…။
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ အနေနဲ့ အားယူရမှာက အစိုးရသတင်းစာတွေရဲ့ လိုအပ်သလို ဖြတ်တောက် တင်ပြတတ်တဲ့ သတင်းတင်ပြပုံတွေကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သတင်းတင်ပြပုံတွေပါပဲ…။
(၂၅-၄-၂၀၁၃) ထုတ် စံတော်ချိန် (Standard Time) သတင်းစာရဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ စာလုံးမည်းကြီးနဲ့
တပ်မတော်သားသုံးဦး သမီးရီးဇား စုံတွဲအား သတ်ဖြတ်…၊
ဥပဒေအရ အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးရန် ပြည်မြို့ခံများတောင်းဆို…
သတင်းခေါင်းစဉ်ကို မျက်နှာဖုံးမှာ စာလုံးမည်းကြီးတွေနဲ့ ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး…
သတင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ စာမျက်နှာ ၁၀ မှာ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပါတယ်ဗျာ…။
သတင်းရေးသူအမည်က ငြိမ်းချမ်းဝေ ဖြစ်ပါတယ်…။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ခြမ်း) ပြည်မြို့တွင် ဧပြီ ၂၃ ရက် ည ၉ နာရီခွဲ ၀န်းကျင်ခန့်က ဆင်စုရပ်ကွက်အပိုင် ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေး view point အနီး ဖြစ်ပွားခဲ့သော တပ်မတော်သား သုံးဦး၏ သတ်ဖြတ်လုယက်ခံရသည့် သမီးရီးဇားစုံတွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သူများအား အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် မြို့ခံလူထုက အမှတ်(၂) ရဲစခန်းရှေ့တွင် ညတွင်းချင်း ၀ိုင်းဝန်း တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ view point အနီး မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် ချိန်းတွေ့နေကြသည့် သမီးရီးဇား နှစ်ဦးအား တပ်မတော်သားသုံးဦးက ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက် လုယက်ခြင်းကြောင့် ကောင်လေးမှ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ကောင်မလေးကိုလည်း ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်လူနာဆောင်သို့ ညတွင်းချင်း တင်ပို့ ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ရကြောင်း အမှတ် (၂) ရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွားပြီးချိန်တွင် ကာယကံရှင် မိန်းကလေးနှင့် တွေ့ဆုံကူညီပေးခဲ့ရသည့် view point တာဝန်ခံ ဦးလေးတစ်ဦးက “ကောင်မလေးက အသံတိတ်တက်လာတယ်၊ အပေါ်လည်းရောက်ရော ထိုင်ချပြီး ငိုလည်းငို၊ ကျွန်မကို သေအောင်သတ်တာပါ၊ သတ်ကြတာပါ၊ ပြောတော့ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး ကျောက်တိုင်ဘက်ကို လူစုခွဲပြီး လိုက်ကြလို့ ရပ်ကွက်ထဲကိုလှမ်းအော်တော့ ကမ်းနားမှာ လိုက်ရှာတော့ ပထမပုန်းနေကြတယ်၊ နောက်ကြတော့ ကိုင်းတောထဲက အသံကြားလို့ ၀ိုင်းပိတ်ဖမ်းတာမှာ သုံးယောက်ကို နှစ်ယောက်မိတယ်၊ တစ်ယောက်ကတော့ လွတ်သွားတယ်”
ဟု ပြောဆိုသည်။ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားများ၏ ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးမှုကြောင့် လုယက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တပ်မတော်သားများအား ချက်ခြင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် ၄င်းတို့၏ တပ်မှ ဗိုလ်ကြီးဆိုသူရောက်လာပြီး အမှတ် (၂) ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ဒုရဲအုပ်စန်းဦး နှင့် စကားပြောဆို၍ စစ်သား နှစ်ဦးအား ပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ရဲက ၀ိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပေးသူများကို လူစုခွဲခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ တစ်နာရီခွဲခန့်ကြာပြီး ကာယကံရှင်မိသားစုများရောက်လာကြ၍ ကောင်လေးအား လိုက်လံရှာဖွေကြရာ မြစ်အတွင်း သေဆုံးလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရပြီး ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းဆင်စုရပ်ကွက်သားများကရှင်းပြသည်။
“စစ်သားတွေကိုဖမ်းမိလို့ ရဲစခန်းကိုပို့မလို့ လုပ်နေတုန်းမှာ ဗိုလ်ကြီးလိုက်လာပြီဆိုပြီး ပခုံးဖက်ခေါ်ပြောဆိုပြီး သူ့တပ်သား
နယ်မြေခံတပ်ရင်းတပ်က ဗိုလ်ကြီးမင်းသူအောင်လို့ ပြောတယ်…။ ပြီးတော့ ဒုရဲအုပ်စန်းဦးက ခင်ဗျားတို့တွေ ဘာမဟုတ်တဲ့
ပြသနာလေးကို လူစုစုလုပ်မနေနဲ့၊ လူစုခွဲကြလို့ပြောတယ်၊ သူပြောပြီးတော်တော် ကြာလို့မှ ကောင်လေးကို လိုက်ရှာတဲ့
အခါကျမှ ကောင်လေးအလောင်းကိုတွေ့ရတာပါ။ အချိန်မီသာရှာဖွေခွင့်ရရင် အခုလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံချင်မှ ကြုံမှာပါ”
တပ်မတော်သားများ၏ ထိုးကြိတ်လုယက်ခံခဲ့ရသည့် ကာယကံရှင် မအိဇင်မိုးကိုက “ကျွန်မတို့ထိုင်နေတုန်း အပေါ်ပိုင်း အ၀တ်ဗလာကျင်းထားတဲ့ လူသုံးယောက်ရောက်လာပြီး မီးခြစ်တောင်းတယ်။ မရှိဘူးပြောလိုက်တော့ နောက်ဘက်ကနေ ကျွန်မလည်ပင်းကို ညှစ်ပြီး တစ်ယောက်က ထိုးကြိတ်နေတုန်း ကျန်နှစ်ယောက်က ကိုဇော်မင်းဦးကို ထိုးကြတယ်။ ကျွန်မ လည်ပင်းကိုညှစ်ထားတဲ့အားက တအားသန်လွန်းလို့အသက်ရှူရပ်မလို ဖြစ်သွားသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကတော့ ကျွန်မ
ငြိမ်သွားတာကို သေပြီအထင်နဲ့ ကျန်တစ်ယောက်ဘက်ကို အကုန်လှည့်သွားပြီး မြစ်ထဲကို တရွတ်ဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်မအကူအညီ သွားတောင်းရတာပါ”
ဟု ၄င်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်ကို ရှင်းပြသည်။
လုယက်သတ်ဖြတ်သွားသော တပ်မတော်သားများအား ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပေါ်မကျေမနပ်ဖြစ်သော မြို့ခံ ၁၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်သည် ယင်းည ၁ နာရီခန့်တွင် အမှတ် (၂) ရဲစခန်းရှေ့သို့ စုဝေးရောက်လာကြပြီး တာဝန်ရှိရဲဝန်ထမ်းများမှ အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုကြရာ မြို့နယ်ရဲမှူးမြင့်ဦးက “အရေးယူပေးမယ်။ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါ့မယ်။ တပ်အချုပ်မှာ ဖမ်းထားပြီးပြီ။ အမှုလည်း ဖွင့်ထားပြီးပြီ။ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရတာကတော့ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်အရ တပ်မတော်သားဖြစ်ရင် တပ်မတော်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတော့မှ တပ်မတော်ဥပဒေနဲ့ တပ်ကအရေးယူပြီးရင် အမှုကြီးရင် နယ်ဘက်ဥပဒေအရ အရေးယူဖို့ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ သတ်မှတ်ပြီးသား။ ဟိုဘက်ကလည်းအရေးယူမယ်။ ဒီဘက်ကလည်းအရေးယူမယ်။ အခုကတော့ ဗိုလ်ကြီးမင်းသူအောင်က လွှဲပြောင်းယူထားပါတယ်။ စစ်တပ်မို့လို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတာမျိုး မရှိအောင်
တာဝန်ယူပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့ လုပ်မှာပါ” ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အထက်ပါဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမှတ် (၂) ရဲစခန်း မှ (ပ)၂၉၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၀၂၊ ၃၂၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရ၍ သေဆုံးသွားသူမှာ အသက် (၂၁)နှစ် ရှိကာ လက်စွပ်တစ်ကွင်းနှင့် ငွေသားအချို့လည်း လုယက်ခံရကြောင်း၊ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော မြို့ခံလူထုမှာ ည ၂ နာရီခန့်တွင် လူစုခွဲသွားကြကြောင်း အဆိုပါရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။
အထက်ပါသတင်းကို ၂၅-၄-၂၀၁၃ နေ့ထုတ် စံတော်ချိန် သတင်းစာမှာ မျက်နှာဝက်ခန့်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး သတင်းစာဖတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘလက်ကြီးကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…။
အစိုးရထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ ကြေးမုံကလည်း ဘယ်နေလိမ့်မလဲခင်ဗျာ…။
၂၅-၄-၂၀၁၃ ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာမှာပဲ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်…။
ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ စာမျက်နှာက (၃) ခင်ဗျ…။
၃လက်မ ၂ကော်လံလောက်သာရှိတဲ့ ဆိုက်လေးအတွင်းမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တာပါ…။
ကဲ…မူရင်း သတင်းအသွားအလာလေးလည်း ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး…။
ပြည်န၀ဒေး တံတားအနီး လုယက်ခံရ၍ တစ်ဦးသေဆုံး
ပြည်မြို့ န၀ဒေးတံတားအနီးတွင် စုံတွဲတစ်တွဲ လုယက်ခံခဲ့ရရာမှ တစ်ဦးသေဆုံးသွားရသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဧပြီ ၂၃ ရက်
ဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီ ၂၃ ရက် ည ၈ နာရီ ခွဲခန့်တွင် အဆိုပါ န၀ဒေးတံတားအနီးတွင် အမျိုးသားသုံးဦးသည် စုံတွဲတစ်တွဲထံမှ
လုယက်သည်ဟု သိရပြီး ၄င်းစုံတွဲမှ ယောက်ျားလေးဖြစ်သူ သေဆုံးသွားပြီး မိန်းကလေးဖြစ်သူမှာ ဒဏ်ရာရရှိကာ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရကြောင်း သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့စဉ် မိန်းကလေး ဖြစ်သူက ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်သိပြည်သူများ၏ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု တိုင်ကြားခံရသူများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အတွက် ပြည်ရဲစခန်းက ပ-၂၉၄/ ၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၀၂၊ ၃၂၅ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဆိုတော့ စံတော်ချိန်သတင်းစာက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြင် ပြစ်မှုဖြစ်ပွားရာအရပ်က အဖြစ်အပျက်အတော်များများကို သတင်းဖတ်သူ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေတယ်ထင်ရအောင် တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်…။
ကြေးမုံသတင်းစာကတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာ တပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို မဖေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့ အပြင် ပြစ်မှုဖြစ်ပွားရာ အရပ်က အဖြစ်အပျက်အတော်များများကို သတင်းဖတ်သူ နားလည်အောင် မတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး…။
ဆိုတော့ အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ၂ စောင်လုံးရဲ့ လူသတ်လုယက်မှုကျူးလွန်တဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရသူ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖီလင်ကို အတိအလင်းပြောခွင့်ပြုပါ။
စံတော်ချိန်သတင်းစာပါ သတင်းကိုဖတ်ရသူက သတင်းအစအဆုံး ပွင့်လင်းစွာရေးထားတာကို ဖတ်ကြရတဲ့အတွက် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ အရသာကို ခံစားရသူပါ…။
ကြေးမုံသတင်းစာပါ သတင်းကို ဖတ်ရသူ က နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက် ရဲ့ ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ နားစွန်နားဖျား သတင်းရေးသားမှုတွေကို ဖတ်ရသူတွေပါ…။
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဲ့…။
အစိုးရသတင်းစာတွေက အကျဉ်းသားတဲ့…။ နိုင်ငံရေး ဘယ်ပြုတ်ကျန်ခဲ့တယ်မသိ…။
အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းတွေ မတူညီကြတာကို ပြောပါတယ်…။
ကျွန်တော်တို့ နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက်မှာ နေလာကြတာကြာပါပြီ…။
သတင်းတစ်ပုဒ်ကို အရှိအတိုင်း ဖတ်ချင်ကြပါပြီ…။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက် ထဲမှာ မနေချင်ကြတော့ပါ…။
အမှု့တစ်ခုကို အမှု့တစ်ခုလို့ သုံးနှုံးကြစေခြင်သတဲ့
ဆိုလိုတာက မ တစ်ထောင်သားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် တပ်မတော်ကိုမသုံးနှုံးလည်းရပါသတဲ့
လူလေးငါးယောက်ကိုတန်းစီထားပြီး ကောင်မလေးကို ပြပါသတဲ့
ကဲ ညီမလေး ဘယ်သူလည်းရွေးပေါ့
ကဲတွေ့တယ်မဟုတ်လား တပ်မတော်သားတွေကို စော်ဂါးဒါပါတဲ့
ဈေးဝယ်ရောင်းရင်း ရန်ဖြစ်ကြတာကို ကလားဗမာပြဿနာလုပ်ကြလို့ ကိုကျိုးနည်းကြသလို
မှတ်ချက်။ ။ ဝါးတားတားကြားမိခြင်းသာ
နောက်လာမယ့် ကွန်းမန့်များအတွက်လည်း ကျေးဇူးကြိုတင်ထားပါတယ်ဗျာ…။
မနက်က ၀င်မန့်တာ တွေ့လိုက်တော့ ဘဘဘလက်ပိုစ့် တက်မယ် ထင်မိသား ထင်တဲ့အတိုင်းကို တက်တာကိုး
တခြားတော့ မသိဘု ကိုကိုကြောင်က တော့ ၀မ်းသာအားရ လက်ခမောင်းခတ်နေလေရဲ့…
(ဒေါ်ဘယ်ဘလက် တိုက်မယ်ဆိုလား..) ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရရင်လည်း
အစိုးရ သတင်းစာကတော့ တပ်မတော်ကို
တစ်ခုသတိထားရမှာက ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေအနေနဲ့
ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမယ်နော…နောက်ဆို တရားတွေဘာတွေ ရင်ဆိုင်ရမှာလေ
အလဲဗင်းမီဒီယာမှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့…“လားရှိုးမြို့တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ခံရမှုနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗလီမီးရှို့မှုများကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ပုဒ်မ-၁၄၄ ထုတ်ပြန်” ဆိုတဲ့သတင်းမှာ…ဘယ်လိုဖေါ်ပြလည်းဆိုတော့..
ဖြစ်စဉ်မှာ ယင်းနေ့ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် သန္နီလမ်းပေါ်၌ ဓာတ်ဆီရောင်းနေသော မအေးအေးဝင်း (၂၄ နှစ်) (ရှမ်း/တရုတ်/မြန်မာ/ဗုဒ္ဓ) ကို ကျိုင်းတုံမြို့၊ ၂ ရပ်ကွက်မှ ရောက်ရှိလာသူ နေ၀င်း (၄၈ နှစ်) (အိန္ဒိယ/တရုတ်/အစ္စလာမ်) မှ ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့ရန် ပြေးလိုက်သဖြင့် မအေးအေးဝင်းမှ ရတနာတင်းတိမ် လမ်းအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုလမ်းအတွင်းမှာပင် မအေးအေးဝင်းမှာ မပြေးနိုင်တော့ဘဲ မိသွားစဉ် နေ၀င်းမှ ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း၊
အဲဒီမှာ စာဖတ်သူနားရှုပ်စေတာက…(ရှမ်း/တရုတ်/မြန်မာ/ဗုဒ္ဓ) နဲ့ (အိန္ဒိယ/တရုတ်/အစ္စလာမ်)
ဆိုတော့ သဘောက သတင်းတင်ပြရာမှာ ရှင်းလင်းတိကျဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုချင်တာပါ..
ဟီဟိ …ရှာကီယာကြီးပြေးမြင်ဒယ်ဗျို့ ..(အီတာလျှံ/စပန်းနစ်/ကိုလံဘီယံ/ခွစ်ရှန်)
ကွိကွိ …. ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ပြီး မြန်မာစကားပြောတဲ့ ရှမ်းတရုတ် ကပြားမ နဲ့ ပန်းသေး မူစလင်ထီး ဆို ပြီးတာကိုဗျ .. နော..
သူရို့လည်း ဘောင်ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းတွေ ကြားက ရေးရတာကိုးဗျို့ .. (သိတဲ့အတိုင်း ကီလားတို့ ဘာတို့ သုံးမိရင် တီရားလည်း ဆွဲခံရနိုင်သလို
ဆန်ဒါလည်း ပြခံရနိုင်သလို ထီကရုံး ရဲ့ ဂျိုးကိုင်သူတောင် ဖြစ်နိုင်ကိန်းကိုးးးး)
This is not about TaT_Ma_Daw.. this is about NEWs
မန့်ချင်ဇရာ (နန်းချင်စရာလေး မဟုတ်ပါ) တော့ပစ် တပုံတပင်ထွက်အောင် ရေးလည်း ရေးတတ်ပ ဘဘဘလက်ေ၇….။
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ မှာ အခက်အခဲတော်တော်များများ ရှိနေတာကို
တဖြည်းဖြည်းတော့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ကိုမိုက်ရေ…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တဖြေးဖြေးတော့ ဇကာတင်ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မယ်…။
ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ…။
ဦးမိုက် စာ ကို ဆင့်ပွားတွေးရရင်တော့ သာမန်လူတွေသာမကဘဲ မီဒီယာဆြာတွေပါ
မူစလင် ဆိုတဲ့ ဘာသာ နဲ့ အိန္ဒိယ ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုး ဆိုတာကိုကို တွဲပြီး မြင်နေသေးတာပါပဲ..။
အဲ့သည့် ၃ခုစလုံးကို (သူရို့မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်) ကုလား ဆိုတဲ့ စကားလုံး နဲ့ ယေဘုယျ ခြုံပြောနေကြဆဲလည်း
ဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ကာ ရှုပ်ကုန်သပေါ့ဗျာ။ အိန္ဒိယ ဆိုတာကလည်း ဟိန္ဒူအများစုရဲ့ တိုင်းပြည်မဟုတ်လား။
တွေးစရာများတဲ့ ..နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုပါတော့ဗျာ..
အမှုမှာ စီရင်ချက်ချဖို့သက်သေ ခိုင်လုံဖို့ လိုပါတယ်
သက်သေမခိုင်ရင် တရားရှင်လွတ်သွားနိုင်လို့ ပါ ။ဆန့် ကျင်ဖက်အားဖြင့်
ဒါကိုသဘောပေါက်သူတွေက သက်သေမခိုင်လုံမှုကို ဇောင်းပေးတင်ပြပါတယ်
တနည်အားဖြင့် သက်သေကိုဝေဝါးအောင်ပြုလုပ်ပါတယ် ။
ဒီလိုနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာတတ်လို့ ဒီအမှုမှာ အထူးသတိထားကိုင်တွယ်ရမှာပါ ။
၁ ။ မျက်မြင်သက်သေ တတိယလူမရှိပါဘူး
၂ ။ တရားလိုဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးဟာ သတိမေ့သလို ဖြစ်တယ်လို့ ထွက်ဆိုထားပုံ
ရတယ် ။ဒါကြောင့် သူ့ ထွက်ဆိုစွတ်စွဲချက်ဟာ မခိုင်လုံသလိုဖြစ်နေတယ် ။
၃ ။ နောက်ကွယ်မှာသြဇာရှိသူများပါဝင်နေတာ ကံဆိုးခြင်းတမျိုးပါပဲ
၄ ။ တတ်မတော်သားလို့ စွတ်စွဲပြီး အမှုဖွင့်ခဲ့ရင် တနည်းအားဖြင့်အမှုကိုပေါ့အောင်လုပ်လို့ ရနေတယ်
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတ်မတော်သားမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြလိုက်တာနဲ့ တရားခံ အသစ်ရှာရတော့ မှာပါ ။
မသင့်တော်တော့ လို့ ပါ
ဒီကွန်မန့် ကို မသင့်တော်ဘူးထင်ရင်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖတ်ပြီးရင် တွေးကြည့်ပြီးဖျက်စေချင်ပါတယ် ။
ပြဿနာဖြစ်တာနဲ့ လူတွေက တရားခံလို့ပြောလို့ရတဲ့လူတွေကိုဖမ်းမိတယ် သုံးယောက်
ဖမ်းမိလိုက်တဲ့ တရားခံလို့ဆိုရမည့်သူတွေအက အဖွဲ့စည်တစ်ခုကို ပြောပုံရတယ်
အဖွဲ့စည်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောက်လာပြီး ဒါဒို့ကိစ္စပါ ဒို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထုတ်သွားတယ်
ရဲစခန်းကြီးကိုယ်တိုင်က ( ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက္ခံထားတဲ့ ) ဖမ်းထားတဲ့လူတွေကို ထုတ်ပေးလိုက်တာ
အဲ့သည်လူ သုံးယောက်က အဖွဲ့စည်းကမဟုတ်ရင်ဘယ်ကလည်း
သူတို့ကိုဖမ်းပေးတဲ့ လူအုပ်စုကြီးရယ် ရဲစခန်းရယ်က ဆင်ထက်ကြီးတဲ့သက်သေရှိတယ်
အဲ့သည်လူသုံးယောက် ဘယ်ပျောက်သွားပါလိမ့် ??????
အဘကိုအောင်ပုလုပ်တာနဲ့တော့သေပြီဆရာ
အသေးစိတ် နောက်မှလာရှင်းမယ် ။
ဖမ်းမိတာနဲ့ တရားရုံးစီရင်ထုံးက မတူဘူးလေ
ဖမ်းမိတိုင်းတရားခံဖြစ်ပါပြီလို့ ပြောလို့ မှမရတာခင်ဗျ
အဲ့လို တရားခံရှေ့ နေကမေးမယ်ဆိုရင်
ဒီပေါ်မှာပြောရင်း ဂွင်းလုံးကျွတ်လဲ လွတ်သွားဦးမယ် ။
ကျွန်တော် စာပို့ ပေးပါမယ်
ယူအက်စ်မှာ.. ဘေ့ာစတန်ဗုံးခွဲတဲ့အမှုဖြစ်တော့.. တော်တော်ကြာတဲ့အထိ.. မိန်းစရင်းမီဒီယာတွေ.. တရားခံအဖြစ်ယူဆရသူကို.. မွတ်စလင်လို့မသုံးနှုန်းကြတာသတိထားမိပါတယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်… သတင်းထဲ.. လူမျိုး..ဘာသာ မရေးသင့်ပါဘူး..။
တရားရေးမတက်မချင်း.. တရားသူကြီးမဆုံးဖြတ်မချင်း… တရားခံမဟုတ်သေးတာမို့…
သတင်းရေးရာမှာ.. တရားခံအဖြစ်ပုံဖေါ်နေစေတဲ့.. ရှေ့ညွှန်ပြစာသားတွေ မသုံးနှုံးရမှာလည်း.. တပိုင်းပေါ့…
ဗမာပြည်မှာက အမှုဖြစ်တာနဲ့ တရားခံလို့ ရေးနေ ပြောနေတာ
တရားခံဟု ယူဆဖွယ်ရှိသောသူ လို့ သုံးနှုံးသင့်တာပါ ။
ယခုအမှုမှာလည်း ဒီကဥပဒေဖြတ်ထုံးအရ တတ်မတော်သားဖြစ်ကြောင်း သေသေချာချာမပြနိုင်သေးပဲ စွတ်စွဲတယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒါ ….. ထွက်ပေါက် !!
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ…။
ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာက ကျွန်တော့်အမြင်ကို ရေးလိုက်တာပါ…။
ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေ ထဲ မှာလဲ ထူးမခြားနား အပေါစားတွေ အများကြီး လို့ ပြောရင် မေတ္တာပို့ခံရမှာ။
ဒါပေသည့် အမှန်သိဖို့၊ Feedback တွေ ကို နားထောင်တတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်တွေ အများကြီးလို နေတာကိုမှမပြင်ရင် အရည်အချင်းပြည့်သတင်းတွေ ဘယ်တော့မှ ဖတ်ရမှာမဟုတ်။
စာလုံးပေါင်းမှန်ဖို့၊ သဒ္ဒါမှန်ဖို့တောင် အရင်ကြိုးစားကြပါဦး။
တစ်ချို့ သတင်းတွေဖတ်ရတာ စကားလုံး အထားအသိုနေရာ မမှန်တော့ အဓိပ္ပါယ်လွဲရောဘဲ။
နားစွန်နားဖျားရပ်ကွက် တွေကတော့ နားစွန်နားဖျားမှ ကြားချင်သူ အတွက်တော့ လိုနေဦးမှာပါဘဲ ကဘချော ရယ်။
ပြောချင်တာတွေ ဝင်ပြောတာ မူရင်းကို တစ်လွဲ ဖြစ်နေရင်တော့ စောဒီး ပါရှင်။
မူရင်းကို တစ်လွဲ မဖြစ်ပါဘူး အစ်မရေ…။
တစ်သက်လုံး ထုတ်ဝေခွင့်မရခဲ့တဲ့ သတင်းစာ…၊
စထုတ်စ မှာတော့ အမှားတွေ ပေါပေါများများပါနေဦးမှာ ပါပဲ…။
အစိုးရသတင်းစာနဲ့ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေက ပြိုင်ဆိုင်မှု ပျင်းထန်တဲ့
တချို့ ရေရှည်မရပ်တည် နိုင်မှာကို စိုးရပါတယ်…။
လက်ရှိပြိုင်ပွဲမှာ အစိုးရသတင်းစာတွေက အသာစီးရနေပါတယ်…။
အစိုးရက ချထားပေးတဲ့ ဘတ်ဂျက် ရှိတယ်…။
သတင်းစာတိုက်၊ ပုံနှိတ်တိုက်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ဖြန့်ချိရေး၊
တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေ…၊ စတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘူး…။
ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကတော့ စစချင်း တည်ဆောက်ဆဲကာလဆိုတော့…
နောက်တစ်ခု ၀ယ်ဖတ်ချင်သူရှိပေမယ့် ၀ယ်ဖတ်မယ့်သူ ရှေ့ကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်ဦးမှ…။
ဆိုတော့ အားနည်းချက်တွေက တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ…။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် လွတ်လပ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာတွေ လိုအပ်ပါတယ်…။
(အင်း…လေကြီးမိုးကြီး ဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါအစ်မရေ…။)
ဒါကြောင့် သူတို့ကို အားပေးဖို့ မားကက်တင်း ဆင်းပေးတာပါ အစ်မရေ…။
ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲမှာ သူကြီး မကြာခဏတင်ပေးတတ်တဲ့
ခင်မမမျိုး ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေတောင် မကြာမကြာ ဖတ်နေရပါပြီ…။
ဆိုတော့အားနည်းချက်တွေတော့ ရှိကောင်းရှိနေပေမယ့် …
ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကို အားပေးဖို့ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ ခင်ဗျာ…။
သတင်းစာ ပီပီသသ လည်း ဖတ်ချင် မိပါရဲ့
သတင်းစာ ပီပီသသ ဖတ်ချင်ရင် နည်းနည်းတော့ အချိန်ပေးရပါမယ်
@etone ;
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါetone ရေ…။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ…။
မင်ဂါဘာ အူးချောကလက်ဂျီးရေ … ။
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးအများစုက … အနှောင့်သွားလွတ်အောင် ရေးရတော့လည်း စာဖတ်သူကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းလျော့သွားတာမျိုးထင်ပါရဲ့ ။ အရင်က သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဂနေ့လို မဖြစ်သေးတဲ့ အနေထားဆိုဒေါ့ …. အတိမ်းစောင်းလွတ်အောင် ရေးရတယ်ပေါ့ … ။ နိုင်ငံပိုင် ဆိုတော့လည်း … အဟီး … ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းလို့က ဖြစ်တေးဝူးကိုး .. ။ ရှင့်ဘုရင့်ပုဆိုး .. ပိုးဆိုတာချည်းပဲ ရေးရတော့သကိုး … ။
ထုတော့လည်း … ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ၊ဂျာနယ်တွေမှာ သတင်းရေးတဲ့ အရေးသားက ပိုပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတာရော … သတင်းဖြစ်စဉ်ကို အမြန်ဆုံးဖော်ပြပေးနိုင်တာကရော…. ပိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးနိုင်တာရော … စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတွေကို ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ညွှန်းခွင့်ရနေတာတွေကိုရောက … နိုင်ငံပိုင် သတင်းစားတွေထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှုအားကောင်းနေပြန်ရော … ။
မြို့လုံးပတ်လည် ဒူဝေေ၀ ကိုဘလက်ပါခင်ဗျား